Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: February 2009
လှေစီးပြေး ရိုဟင်ဂျာ( သို့ ) ဘင်္ဂါလီ တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ကြောင်း အထောက်အထား ပြနိုင်ရင် ပြန်လက်ခံမည်
စစ်အစိုးရကို နိုင်ငံတကာခုံရုံးတင်နိုင်ရန် နာဂစ်မုန်တိုင်းအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်
Posted by yahutha at 2:42 PM0comments
(မေ ၃၀) ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆၉)လ ပြည့်် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား
(မေ ၃၀) ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆၉)လ ပြည့်် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)ဂျပန်ဌာနခွဲမှ ဦးဆောင်၍ ရှိနဂါဝါရှိ မြန်မာသံရုံး (အခွန်ရုံး) ရှေ့တွင် ဒီကနေ့ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေသော်လည်း ဂျပန် ရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူများ အယောက် ၁၆၀ကျော် တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
Posted by yahutha at 2:22 AM0comments
UN Chief Urges the Regime to Release All Political Prisoners (VOA Burmese)
The UN Secretary-General Ban Ki-moon calls the Burmese military regime to release all remaining political prisoners and to engageameaningful political dialogue with the opposition.
Posted by yahutha at 3:59 PM0comments
Posted by yahutha at 2:23 AM0comments
မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးဝင်ငွေ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ တဦးကျပ်သုံးသိန်းခွဲရှိဟု ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေပြော
Posted by yahutha at 1:57 AM0comments
Statement 25 Feb 2009
Publish at Scribd or explore others: Business Business financial statement
Posted by yahutha at 1:41 AM0comments
Posted by yahutha at 1:40 AM0comments
မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆၉)လ ပြည့်် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား
မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆၉)လ ပြည့်် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)ဂျပန်ဌာနခွဲမှ ဦးဆောင်၍ ရှိနဂါဝါရှိ မြန်မာသံရုံး (အခွန်ရုံး) ရှေ့တွင် ၂၇.၂.၂၀၀၉ နေ့လည် ၃း၀၀နာရီ မှ ၄း၀၀နာရီ အထိကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များ (မပျက်မကွက်) ၊ ဂျပန်ရောက် မြန်မာဒီမိုကရေစီလိုလားသူများအားလုံး တက်ရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
Posted by yahutha at 1:36 AM0comments
Japan news agency awards jailed Burmese female repoterမအိမ့်ခိုင်ဦး
Posted by yahutha at 3:43 PM0comments
နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင် တဦးသည် မူးယစ်ဆေး လုပ်ငန်း၊ ငွေမည်း ခဝါချသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်နွယ် နေကြောင်း ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ်က ဗီအိုအေ မြန်မာပိုင်း အသံလွှင့်ဌာနသို့ ပြောလိုက်သည်။
Posted by yahutha at 3:09 AM0comments
Posted by yahutha at 4:01 PM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င်မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးလွှတ်ပေးဖို့ နိုင်ငံတကာ ၀ိုင်းတောင်းဆို
Posted by yahutha at 3:37 PM0comments
Naypyidaw, the new capital of Myanmar(ミャンマー新首都ネピドー)
Posted by yahutha at 3:40 AM0comments
Public Announcement 23rd FEB
Publish at Scribd or explore others: Academic Work Other public Phả
Posted by yahutha at 3:26 AM0comments
Publish at Scribd or explore others: Religion & Spiritual Essays bible pollution
Posted by yahutha at 3:13 AM0comments
The 61th Anni of CND Statement
Publish at Scribd or explore others: financial statement
Posted by yahutha at 3:11 AM0comments
Posted by yahutha at 3:10 AM0comments
Women Union Tw23
Publish at Scribd or explore others: culture human
Publish at Scribd or explore others: medical therapy
Posted by yahutha at 8:28 PM0comments
နှစ်ရှည် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် လွတ်မြောက်
VOAမြန်မာနိုင်ငံ မှာ အကျဉ်းသားပေါင်း ၆,၃၀၀ ကျော် ကို လွှတ်လိုက်တဲ့အထဲမှာ အမရပူရ လွှတ်တော် အမတ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၁၀ ယောက်ကျော် ပါဝင်ခဲ့တယ် လို့ အခုထိ သိရှိထားပါတယ်။ ယခင်တစ်ခေါက် အကျဉ်းသား ၉,၀၀၀ ကျော် လွှတ်တုန်းကတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၆ ယောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရ က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဘယ်နှစ်ယောက် လွှတ်လိမ့်မလဲ ဆိုတာ ကို ကမ္ဘာ က စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ ဦးတင်မောင်သန်း က တင်ပြထားပါတယ်။
ရွေးကောက်ခံရတဲ့ အမတ်တွေ ထဲမှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကတည်း က နှစ်ပေါင်း ၁၈ နှစ်ကျော် တောက်လျှောက် အကျဉ်းသက်တမ်း အရှည်ဆုံး အမတ် အမရပူရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် ကို စစ်အစိုးရ က လွှတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ကို ပြည်ပမှာ စင်ပြိုင် အစိုးရဖွဲ့ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ ဦးဆောင် သူ တစ်ယောက်အဖြစ် စစ်အစိုးရ က သတ်မှတ်ပြီး၊ ထောင်ဒဏ်၂၅ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ထောင်တွင်း လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေ ကို ရေးသားခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် ယိုဇို ယိုကိုဒါ ဆီ ကို ပေးပို့ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ ထပ်မံ စွပ်စွဲပြီး ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် ၃၇ နှစ် ချမှတ်ခံထားရတာပါ။
ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် လွတ်လာတာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ယုယုမေ က ဗွီအိုအေ ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“တကယ်လွတ်သွားပြီ။ ၄ နာရီ ခွဲလောက်ကျတော့ သတင်းတွေက ကြားနေပေမယ့် ၃ နာရီ ကျော်ကျော်လောက်ကျတော့ ထောင်ပြင်ကို ထုတ်နေပြီ။ ကားစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် အန်တီတို့က တရားဝင် ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်၊ ထောင်ကို ဖုံးဆက်မေးကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီ ၄ နာရီခွဲလောက်ကျတော့ ထောင်ကနေပြီးတော့ - ဟုတ်ကဲ့၊ လွတ်သွားပါပြီလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဘယ်မှာထားလဲ ဆိုတာကိုတော့ သူတို့က မပြောဘူးလေ။ ဖုန်းကို ချပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ဘယ် ဆက်ရမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ ဘယ်ရောက်နေမှန်းလဲ မသိဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ မိုးညင်း က ဦးရွှေစိန် ကလည်း ပါတယ်။ သူ့သမီးလေးကနေပြီးမှ ဆက်တာ။ အဖေ တို့တဲ့ ဟင်္သာ တည်းခိုခန်း၊ မြစ်ကြီးနားမှာ ရောက်နေတယ်တဲ့။ သူနဲ့ အဖေနဲ့ စကားပြောပြီးပြီပေါ့။ ဦးဇော် လည်းပါတယ်ဆိုတာနဲ့။ ကျမတို့က အဲဒီ ဟင်္သာတည်းခိုခန်းကို ဆက်လိုက်တော့ အဲဒီ ဦးဇော်နဲ့ တွေ့ရတယ်ရှင့်။ လောလောဆယ်တော့ သူ နေကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ မနက်ဖြန်ကို သူတို့ မီးရထားနဲ့ပဲ စီစဉ်ပေးလိမ့်မယ် ထင်တယ်ပေါ့လေ။ အဲဒီလိုပဲ ပြောပါတယ်။ အခုတော့ အက်စ်ပီ က ဆိုလားပဲ ခဏ ဆိုပြီးတော့ ခေါ်သွားတယ်တဲ့။ ကျမတို့ကတော့ မျှော်လင့်ထားတဲ့နေ့ ရောက်လာတာပေါ့နော်။ အဲဒါအတွက် ၀မ်းသာတာပါပဲ။ ဒါပါပဲ။”
အခုလို လွှတ်လိုက်တဲ့ အထဲ မှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဘယ်နှယောက်ပါဝင်မယ် ဆိုတာ ကို အမေရိကန် နိုင်ငံ ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မူဝါဒ ကို စဉ်းစားကြမယ့်သူတွေကလည်း စောင့်ကြည့်နေကြမှာပါ။ အာရှ နိုင်ငံ ခရီးအတွင်း မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလရီ ကလင်တန် က မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် ရဲ့ မူဝါဒ ကို ပြန်လည် သုံးသပ်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံ မှာ အပြုသဘော ပြောင်းလာအောင် ဘယ်လို အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ” ဆိုတဲ့ စိတ်ကူး အယူအဆတွေ ကို အမေရိကန် နိုင်ငံ ဟာ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေ နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်လို့ မစ္စကလင်တန် က ပြောပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ၀ါရှင်တန်ပို့စ် အယ်ဒီတာကတော့ “မူဝါဒ ပြန်လည် သုံးသပ်ရာမှာ အစစ်အမှန် လက်တွေ့ကျဖို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လွတ်လာသူတွေ ရဲ့ မိသားစုတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ ကတော့ ၀မ်းသာနေကြပါတယ်။ ခရမ်းမြို့နယ် အမတ် ဦးကျော်သွင် ဟာ ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် နဲ့ တိုက်ထဲမှာ အတူနေခဲ့တဲ့ သူ ပါ။
“ကျနော်က ကိုကြီးဇော်လို့ အမြတ်တနိုး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ ခေါ်ရတဲ့ အစ်ကိုကြီးတယောက် ဒီနေ့ပဲ လွတ်လာတာကို ကျနော် သိရတဲ့အခါမှာ မျက်ရည် လည်လောက်အောင်၊ မျက်ရည်ကျလောက်အောင် ကျနော် ၀မ်းသာပါတယ်။”
ဦးကျော်သွင် လို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ရဲ့ မိသားစုတွေ နဲ့ မိတ်ဆွေတွေသာ မကပါဘူး။ ကုလသမဂ္ဂ ကလည်း မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ ဟာ လက်ချည်းဗလာ ပြန်လာခဲ့ရတယ်လို့ မီဒီယာတွေ က အရေးခံနေရတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ကလည်း အခုလို လွှတ်လိုက်တဲ့ အကျဉ်းသားတွေ ထဲ မှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသမား ဘယ် နှယောက် ပါမလဲ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း ဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ ကို သွားရောက်ဖို့ ဖိအား အပေးခံနေရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို သွားဖို့ ဆိုရင်၊ မြန်မာ စစ်အစိုးရ က လာမယ့် လတွေ မှာ လာထိုက်ကြောင်း အချက်ပြဖို့ လိုလိမ့်မယ်လို့ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ က သတင်းထောက်တွေ ကို ပြောပါတယ်။ “အခုလို အကျဉ်းသမားတွေ ကို လွှတ်လိုက်တာ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းမားတွေ ကို လွှတ်လိုက်တာ ကို ကြိုဆိုပါတယ်။
အဲဒီလို ကြိုဆိုတာ ဟာလည်း မျှတရာရောက်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။” လို့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ မှာ ထုတ်ဝေတဲ့ The Hindu သတင်းစာ ကို မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ က ပြောပါတယ်။ လွှတ်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား က ၁၀ ယောက်ကျော်ပဲ သိရပါသေးတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသမား လွှတ်လိုက်တာ ကို ကြိုဆိုပါတယ်လို့ ပြောရာမှာတောင် အဲသလို ကြိုဆိုတာ က မျှတပါတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ကတောင် ဆင်ခြေပေးနေရရှာတဲ့ အဖြစ် ဖြစ်နေပါတယ်။
Posted by yahutha at 7:57 PM0comments
Posted by yahutha at 5:24 PM0comments
ဘာမှ ယုံမှား သံသယ မရှိသင့်..ညီညွတ်စွာ..ရှေ့ ဆက်လျှောက်သင့်ပြီ
Posted by yahutha at 4:38 PM0comments
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်အား မယ်တော်ဆေးခန်း အနှစ် ၂၀ ပြည့်နှင့်စပ်လျဉ်း ၍ မေးမြန်းခြင်း
Posted by yahutha at 1:57 PM0comments
မယ်တော်ဆေးခန်း နှစ် (၂၀) ပြည့်အခမ်းအနား (ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း)
Posted by yahutha at 2:36 PM0comments
Posted by yahutha at 3:03 AM0comments
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဂျပန်အစိုးရအား တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ ဦးတင်ဦး ဦးခွန်ထွန်းဦး၊၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံး ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေး အတွက် ဂျပန်အစိုးရမှ ထိရောက်သည့် ကူညီလုပ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်လာရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားများ မှ ဂျပန်နိုင်ငံ၏လွှတ်တော်ရှေ့တွင်တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြရာ လူ၁၅၀ကျော် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ဓါတ်ပုံ ။ ကိုထွဏ်းမြင့်
Posted by yahutha at 2:37 AM0comments
လူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် စတေးခံ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာအဖွဲ့ မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံး လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှု ထပ်မံပြုလုပ်။
လူငယ်များ တိုးတက်ရေးအတွက် ဆရာအောင်သင်း၏ အကြံပေးချက်
Posted by yahutha at 2:08 AM0comments
NLD Statement Tw23
Posted by yahutha at 3:17 AM0comments
အောင်လင်းထွဋ် (ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်း)ပေးစာများ
Posted by yahutha at 3:04 AM0comments
2nd PL TW23
Posted by yahutha at 2:58 AM0comments
Publish at Scribd or explore others: Manuals Language fantasy nano
Posted by yahutha at 3:46 PM0comments
Publish at Scribd or explore others: Business Other video writing
Posted by yahutha at 3:54 PM0comments
NLD Union Day Statement Tw23
Publish at Scribd or explore others: Academic Work trade union
Posted by yahutha at 3:53 PM0comments
လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းသူ ကင်တာနား နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့နဲ့ တွေ့ဆုံ
Tomas Ojea Quintana Tw23
Publish at Scribd or explore others: Religion & Spiritual discurso Apocrife
Posted by yahutha at 2:29 AM0comments
(၆၂) နှစ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားကို ဂျပန်နိုငံ တိုကျိုမြို့ တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ
Posted by yahutha at 3:12 AM0comments
Labels: ဓါတ်ပုံ, အမှတ်တရ
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဂျပန်အစိုးရအား တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ (၃)
Posted by yahutha at 2:31 AM0comments
Labels: ဗီဒီယို, အမှတ်တရ
(60th of Karen Revolution Day Ceremony in Karen State-30-1-2009)
Posted by yahutha at 3:35 PM0comments
Labels: သ၀ဏ်လွှာ, သတင်း
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဂျပန်အစိုးရအား တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ (2)
Posted by yahutha at 3:27 PM0comments
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ပစ်ပယ်နေလို့ မြန်မာ့သမိုင်း ထိခိုက်
A S tw23
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ ဦးတင်ဦး ၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး ၊၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ နှင့် နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသားများ အားလုံး ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေး အတွက် ဂျပန်အစိုးရမှ ထိရောက်သည့် ကူညီလုပ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်လာ
ရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားများ မှ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးရုံးရှေ့တွင်တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြရာ လူ၁၀၀ကျော် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
Posted by yahutha at 3:24 AM0comments
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရေး လှုပ်ရှားမှု အန်အယ်လ်ဒီစပြီ
Posted by yahutha at 3:07 AM0comments
Publish at Scribd or explore others: Business media children
Posted by Peaceful Walking at 2:52 AM0comments
Posted by yahutha at 2:33 AM0comments
Posted by yahutha at 2:32 AM0comments
Posted by yahutha at 2:06 AM0comments